Boeing 737-300,400,500 sano 3 3 todobaad ka hor #661
Macluumaadka ku saabsan Xirmooyinkaaga 737. 737-300 Xirmadu waxay ku shaqaysaa ganaax gudaha P3d v4.
737-400 iyo 737-500 way burbureen. Farriinta waa Diyaarad Dheeraad ah.
Thanx for Packets Great iyo Nasiib wacan mustaqbalka
Boeing 737-300,400,500 sano 3 2 todobaad ka hor #668
Haa, qorayaashu waxay u baahan doonaan inay cusboonaysiiyaan adeeggooda si ay ula socdaan naqshadda 64bit.
Waxaan rajeynayaa kuwa abuuray taxanaha B737-800 iyo taxanaha A320 ayaa kordhin doona diyaaradahooda aadka u fiican.
Boeing 737-300,400,500 sano 3 2 todobaad ka hor #670
Ilaa iyo inta aan ka ogahay in aan saxay dhibka ka dhacay shilalka, waxay ahayd uun qiimayaasha qaar ee isbeddelada ku dhaca Aircraft.cfg. Ma ka hadashaa 737 Classic-ka ah ee laga heli karo Rikooooo ama mareeg kale? Ka hor intaadan ku xirmin xirmada Rikooooo hubso inaad ka saarto nooc kasta oo kale.
Boeing 737-300,400,500 sano 3 2 todobaad ka hor #675
Dhibaato isku mid ah ayaan ku haystaa gudaha p3d v4.
Ku xidh xirmooyinkan p3d v4, xulo nooc kasta, duulo, ka dibna CTD.
pfd.xlm iyo eicas.xlm ayaa sababi kara dhibaatadan.
Miyaad fadhi kartaa fadlan?
Soryaan ee Ingiriisiga liita.
Boeing 737-300,400,500 3 sano 1 toddobaadkii ago #684
Arrintan kuma abuurin karo aniga P3Dv4, Waxaan la duulayaa '737-500 autopilot' oo wax walba waxay umuuqdaan inay hagaagsan yihiin.
Laga yaabee inaad iiga sharaxi kartid tallaabo tallaabo ah sida arrintu u dhacayso.
Boeing 737-300,400,500 3 sano 1 toddobaadkii ago #685
Erik mahadsanid jawaabta.
La xaliyay. Waxaan sameeyay bxNUMX-737.cab.
Adeegso sdk eicas.xml iyo pfd.xml ka dibna bilaw ciyaarta oo diyaarso diyaaradda.
Iyo meher p3dv4 hotfix1, looma baahna in wax laga beddelo….
Boeing 737-300,400,500 sano 3 maalmood ka hor 5 #688
Wanaagsan tahay inaad ogaatid, mahadsanid jawaabta
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.225